बेमौसमी बाजा बजिसक्यो, अब कान सुन्ने कि थुन्ने ? | Citizen Post News
बेमौसमी बाजा बजिसक्यो, अब कान सुन्ने कि थुन्ने ?
मलाई लाग्छ गलत समयमा गरेको सही काम पनि गलत नै देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्माले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, रक्षामन्त्री ईश्वर पोख्रेल र आफूसमेतको तीन चौकडीले ल्याएको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश पनि गलत समयको सही काम हो ।
यहाँ म महाभारतको एउटा प्रसँग उठाउन चाहान्छु । सिद्धिप्राप्त शक्तिशाली योद्धाले एउटा वाण प्रहार गर्दा लक्ष्यभेदन गर्नुपूर्व सयौंको संख्या वाणहरू देखिन्छन् । र, मार पनि हान्छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश पारित गराएर त्यही क्षमता देखाएका हुन् ।
पार्टी र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुर्‍याउने कुरा घाँडो सावित भएको थियो । अहिले प्रधानमन्त्री आलेका हातबाट काँडो निस्कियो । यो बेग्लै कुरा हो कि यदाकदा मुढालाई ताकेर हानेको बन्चरोले आफ्नै घुँडो पनि ताकिदिन्छ ।
यो अध्यादेश प्रजातन्त्रविरुद्ध छ जसले भन्छ ऊ स्वयम् प्रजातन्त्रविरोधी हो । किन हो ? त्यसको पनि कारण छ । हिजो पार्टी र संसदीय दल दुवैतिर ४० प्रतिशत पुर्याउनुपर्थ्यो, अब एकातिर मात्रै भए पुग्यो ।
जब हिजोसम्म एउटै भान्सामा पाकेको मिठो उस्तै भात आज कसैलाई साह्रो, कसैलाई काँचो, कसैलाई ढुंगा मिसिएजस्तो लाग्छ भने छुट्टाछुट्टै भान्सा बनाउनु घर फोर्नु होइन ।
बाक्लो दाल खाने सपना देख्नबाट कसैलाई किन रोक्ने ?
तर यो अध्यादेश जति छिटो पारित भयो, यसबाट केपी शर्मा ओलीको प्राथमिकतामा राष्ट्रिय समस्याहरू परेका रहेनछन् भन्ने स्पष्ट भएको छ । भ्रष्टाचारको आरोप लागेको सरकारले जब भ्रष्टाचार छानबिन उच्चस्तरीय आयोग बनाउन छोडेर सुकुम्बासी आयोग बनायो ।
तब यसको रङ कालो छ कि सेतो छर्लङ्ग भइसकेको थियो । लिम्पियाधुरा समावेश गरेर नेपालको नक्सा निकालिहाल्नू भनेर संसद्को राज्यव्यवस्था समितिले दिएको आदेशलाई फोहोरको टोकरीमा फालेबाट देश उहाँको प्राथमिकतामा नपर्ने रहेछ भन्ने देखेबुझेकै थियो ।
अब ओली अरूको शिरमाथि जाँतो झुन्ड्याइदिएर सोफामा उपर्खुट्टी लगाएर मुसुमुसु हाँसिरहन सक्नुहुन्छ ।
तर यो जाँतोको डोरी चुँडिइहाल्दैन । यो तर्साउन मात्र राखिएको हो भन्ने कुरा उनका प्रतिपक्षीहरूले नबुझेका होलान् र ? जे होस् , बेमौसमी बाजा बजिसकेको छ । अब कान थुन्ने कि सुन्ने वा त्यो बाजा नै बजाउन नमिल्ने गरी भाँचभुँच वा तोडफोड गर्ने ?
यो चोट खाएकाहरूको गतिविधिमा भर पर्ने कुरा हो ।
(लेखकः ग्रेटर नेपालका अभियन्ता हुनुहुन्छ ।)
अक्सफोर्डको कोरोना बिरूद्धको खोप ७० मात्र प्रतिशत सफल
२०७७ मंसिर ८ गते २१:१८
ल्याण्ड गर्ने क्रममा प्याराग्लाइडिङ दुर्घटना हुँदा पाइलटको मृत्यु
२०७७ मंसिर ८ गते १९:४६
नवनिर्वाचित सांसद पाण्डेले शपथ लिए
२०७७ मंसिर ८ गते १९:१४
१६ जनाको मृत्यु, पहिलो पटक निको हुनेको संख्या दुई लाख नाघ्यो
२०७७ मंसिर ८ गते १९:०५
३७ बर्षीया आफ्नै श्रीमतीको किन हत्या गरे चूडामणिले ?
२०७७ मंसिर ८ गते ०९:११
फेरिए काठमाडौं र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी
२०७७ मंसिर ८ गते ०८:५६
रत्नपार्कको नाम परिवर्तन गर्ने निर्णय गलत, 'द्धन्द निम्त्याउने काम नहोस्'
२०७७ मंसिर ७ गते १९:४३
२०७७ मंसिर ८ गते २१:२५
लोकप्रियतालाई देखेर आत्तिए, 'भ्रमपूर्ण प्रचारको पछि नलागौँ'
२०७७ मंसिर ८ गते १९:२०